Gawaarida Gawaarida: Qalabaynta Suuqgeynta ee Ecommerce | Martech Zone
Gawaarida Guru: Qalabaynta Suuqgeynta ee Ecommerce
Jimco, Oktoobar 23, 2020 Jimco, Oktoobar 23, 2020 Douglas Karr
Waa nasiib darro in aaladaha ecommerce aysan mudnaanta ka dhigin suuqgeynta. Haddii aad leedahay dukaan internetka ah, gabi ahaanba ma buuxin doontid awoodaada dakhliga oo buuxa illaa aad awoodid inaad iibsato macaamiil cusub isla markaana aad u kordhiso dakhliga macaamiisha hadda jirta.
Nasiib wanaag, waxaa jira nooc fara badan oo ka mid ah istiraatiijiyadaha suuqgeynta suuqgeynta ee halkaas ka jira oo bixiya dhammaan aaladaha lagama maarmaanka u ah inay si otomaatig ah u bartilmaameedsadaan macaamiisha halka ay u badan tahay inay ka furaan, dhagsii, oo ay wax iibsadaan. Mid ka mid ah barnaamijyada noocan oo kale ah ayaa ah Gawaarida Guru. Gawaarida Guru waxay bixisaa astaamo kasta oo loo baahan yahay si loo kordhiyo dakhliga macaamil kasta oo aad ku qabato ololeyaal suuqgeyn shakhsiyeed oo isdaba joog ah.
Gawaarida Gawaarida Gawaarida iyo Faa'iidooyinka ay ku jiraan
Aaladaha Suuqgeynta Suuqgeynta Ecommerce - Gawaarida Gawaarida shaqada ee otomaatigga ah waxay hubiyaan inaad cayrsatid hoggaan kasta oo aad u beddeleyso iib kasta. Dhawr guji oo keliya ayaad abuuri kartaa oo aad u habeyn kartaa ololeyaal loogu talagalay wacyiga, tixgelinta, iyo heerarka daryeelka kadib ee safarka macaamiisha, ka dib riix uun bilowga oo barxadda ayaa daryeeleysa inta hartay.
Ololayaasha Suuqgeynta ee 'Ecommerce Multichannel' - Ololeyaasha suuqgeynta ee Multichannel waxay si otomaatig ah u bartilmaameedsadaan macaamiisha halka ay u badan tahay inay ka furaan, dhagsii, oo ay wax ka iibsadaan. Gawaarida Guru waxay fududeyneysaa in la isku daro emaylka, SMS, iyo Facebook Messenger hal olole oo isku dhafan si loo kordhiyo soo celinta.
Dashboardka Waxqabadka Ecommerce - Falanqee ROI ee ololahaaga oo la soco koritaanka ganacsigaaga dashboardka e-baayacmushtarkaaga. Gawaarida Guru waxay ku siinayaan fikrado ku habboon amarrada, ololayaasha, waxqabadka websaydhka, iyo inbadan si aad u gaadho go'aanno aqoon leh oo aad u kobcin karto ganacsigaaga.
Qaybta Macaamiisha Ecommerce - Si otomaatig ah u diiwaangeli macaamiisha liisaska dhagaystayaasha khuseeya oo leh qayb-caqliyeysan.
Isdhexgalka Iskeelka Suuq-galka Ganacsiga ee Nidaam la'aanta - Maareynta suuq-geynta dukaamada elektaroonigga ah ee badan oo ka socda hal koontada 'Carts Guru' oo ay ku jiraan Prestashop, Magento, WooCommerce, iyo dukaamo badan oo Shopify ah.
Isku day Gawaarida Guru ee Bilaashka ah
Bixinta: Waxaan ahay a Gawaarida Guru xiriiriye.
Tags: ololayaasha ka tagida gawaaridaemayllada ka tagida gawaaridagawaarida sms ka tagidagawaarida guruotomaatiga suuq geynta e-commerceis-dhexgalka ecommerceololaha wadaagista ecommercemagentoPrestaShopdukaankaGawaarida dukaanka oo laga tagobooqasho ololedib-u-guuleysiololeyaal dib-u-guuleysi ah
Balan: Jadwalka Jadwalka-Hal-ku-Dhigga ah ee Ganacsigaaga